DAAWO:- Actorka ku jiray filmka Captian Phillips ee Barkhad C/raxmaan oo dhigay film cusub - Hablaha Media Network
DAAWO:- Actorka ku jiray filmka Captian Phillips ee Barkhad C/raxmaan oo dhigay film cusub
HMN:- Film cusub oo lagu magacaabo A Stray, ayaa laga daawan doonayaa shineemooyinka maanta, kaasoo ka hadlaya nolosha Soomaalida Minneapolis. Waxaana dhigaya actarka ku jira Captian Phillips ee Barkhad Abdirihman iyo Fathia Absie oo ayadana dhigtay isla markana qortay The Lobby.
Sidoo kale, filimkaan ayaa waxaa ka qeyb qaadanaaya majaajiliistaha Happy Khaliif iyo Feysal Khaliif oo qeyb ka ahaa jilayaasha Captian Philips. A Stray, ayaa ku saabsan wiil Somali ah oo Minnesota ku nool, kaasoo nolasha ka dhacaya markey hooyadiis ku eedeysay inuu dahab ka xaday, wuxuuna weynayaa meel uu seexdo iyo wax uu cuno, isagoo weheshanaya Eey oo uu saaxiib ka dhiganayaa.
Barkhad oo Adan ku dhigaya filmkan ayaa asxaabtiis ka goosanaya asagoo kali noqonaya isla markana heesan meel uu seexdo iyo shaqo toona. Adan ayaa masaajidka u hurdo doonta asagoo illaahay ka barya garab uu xigto.helaya. Balse isla markiiba labadaba wuu weynayaa, waxa kaliya oo saaxiib la ah oo intaas daba joogana Eey uu saaxiib ka dhigtay.
Filmkan ayaa waxa soo saaray, Musa Syeed oo u dhashay Pakistan isla markana Muslim ah.